ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: တားရော့ပုံပြင်၏ ဂန္တ၀င် စီးချက်၊ ၀ါးချက် နှင့် လျှပ်တပြက်လည်ပြန် (အပိုင်း-၂)
တားရော့ပုံပြင်၏ ဂန္တ၀င် စီးချက်၊ ၀ါးချက် နှင့် လျှပ်တပြက်လည်ပြန် (အပိုင်း-၂)
ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တုန့်ပြန်မှု ရှိပါတယ်။ တူညီတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ မိမိက အလေးထား တန်ဖိုးထားမှ တစ်ဖက်ကလည်း မိမိကို ပြန်ပြီး တန်ဖိုးထား အလေးထားတတ်ပါတယ်။ တားရော့ကားချပ်တွေကို တန်ဖိုးထားပါ။ အလေးထားပါ။ အဖွင့်ဆောင်းပါးမှာ ပြောခဲ့သလို နို့စို့ကလေးငယ် ကလေးကို ပြုစု ယုယထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သလို အစစအရာရာ အလေးထားပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်မသန့်ရှင်းပဲ အမွှေးနံ့သာ အဆွတ်ပဲနဲ့ မကိုင်ပါနဲ့။ ဆရာအစဉ်အဆက်ကို မေတ္တာပို့ပါ။ ကျေးဇူးတရားကို အောက်မေ့ပါ။ အစောင့်အရှောက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို မေတ္တာပို့ပါ။ ပိုးဖဲကတ္တီပါ အ၀တ်စ (သို့) အိတ်ကလေးနဲ့ သိမ်းဆည်းပါ။ မသန့်ရှင်းတဲ့ လက်တွေနဲ့ လုံးဝ အကိုင်မခံပါနဲ့။ အကြောင်းမရှိ၊ မိမိရဲ့ ခွင့်ပြုချက် မရပဲနဲ့ မကိုင်စေပါနဲ့။
Origin ကားချပ်ထုပ် (ရှေးဟောင်းမူရင်း) ရုပ်ပုံတွေကို ရအောင်ရှာပါ။ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ အသစ်ကို Origin လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ရှေးဟောင်းမူလ ရိုးရာမပျက် (ပြန်လည်ပြုပြင် ရေးဆွဲထားခြင်းမဟုတ်/ နောက်ပေါ်ပုံတွေ မဟုတ်) တဲ့ ရုပ်ပုံတွေပါတဲ့ ကားချပ်ကိုပြောတာပါ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ရှားပါလိမ့်မယ်။ ရှိတော့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီ ပုံတွေပါတဲ့ ကားချပ်ထုပ်ကို ခွင့်တောင်းပြီးတော့ ကော်ပီကူးပြီးတော့ လေ့လာအသုံးပြုပါ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ (၁၈)ရာစု လက်ရာ Swiss 1 JJ (၀မ်းဂျေဂျေ) ကားချပ်ထုပ်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ၀ါသနာရှင်တွေ လေ့လာလိုသူတွေ အတွက် ကော်ပီဖြန့်ဝေဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ပုံနှိပ်ပြီး ပွားရင် ငွေကြေးကုန်ကျမှုတော့ များမယ်။ တစ်ထုတ်ချင်းပေါ်မှာတော့ ဈေးသက်သာနိုင်မယ်။ ကျွန်တော် ကြိုးစားနေပါတယ်။
Origin ပတ်ထုပ်မရသေးခင်တော့ ရနိုင်တဲ့ အထဲက ရုပ်ပုံတွေ ပီပီပြင်ပြင်ရေးဆွဲထားတဲ့ ကားချပ်မျိုးကိုပဲ သုံးပါ။ ဘာပုံတွေမှန်း မသိလောက်အောင် စိတ္တဇပန်းချီပုံတွေ မသုံးပါနဲ့။ ကားချပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အရောင်၊ ရုပ်ပုံ၊ ဟန်ပန်တွေကို လေ့လာ ပုံဖော် အသုံးပြုရမှာမို့ တားရော့ပညာစစ်ကို အသုံးပြုလို့ မရတော့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို ပုံတွေကို သုံးခဲ့ရင် ကြက်တူရွေး စာကျက်၊ စာကလေး ဗေဒင်ဟောသလို နံပါတ်(၁) ကတ်ပေါ်လာရင် အဓိပ္ပာယ်က ဘာ၊ နံပါတ် (၂)ကတ်မြင်ရင် ဒီအတိုင်းဟော အစရှိတဲ့ “ပညာ” မပါတဲ့ ပုံသေကျက်ပြီး ပြောတာမျိုးကိုပဲ သုံးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဝေဒသုတေသနအဖွဲ့က ဆရာတွေက မကြာခဏ ဆုံးမပါတယ်။ စနစ်တကျတွက်တတ်အောင် သင်ယူပါ။ ပြီးမှ အခြေခံ အဟောဥပဒေသတွေကို လေ့လာပါ။ တစ်ဆင့်ချင်း ကျေညက်အောင် လေ့လာ လေ့ကျင့် ပြီးတော့မှ အဆင့်မြင့် ပြည့်စုံတဲ့ အဟောတွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ဟောနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ . . ဘယ်ပညာမဆို သူ့နည်းစနစ်နဲ့သူ အဆင့်ဆင့် စနစ်တကျရှိတယ်။ အဲဒီလောက်မှ မတွက်ချင်၊ မမှတ်ချင်၊ မလေ့ကျင်ချင်ဘူး၊ အပင်ပန်းမခံချင်ပဲနဲ့ ဟောတတ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဘာပညာမှ သင်မနေနဲ့တော့။ ပုတီးစိပ် သမထအားထုတ်ပြီး အကြားအမြင်နဲ့သာ ဟောစားဖို့ ကြိုးစားကြပါတော့တဲ့ . .။ ဆရာတွေ ဆုံးမတဲ့ စကား . .။
“ပညာ” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရမှာ အကြောင်နဲ့အကျိုး၊ အကြောင်းနဲ့ အကျိုးဆက်စပ်မှု၊ အဲဒီဆက်စပ်မှုကို မြင်အောင် ရှာဖွေလေ့လာ ဆင်ခြင်တွေးခေါ် ဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘောထား သဘာဝတရားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတာက တားရော့ပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ တားရော့ပညာဟာ
၁။ ဘယ်ခေတ်က စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သလဲ။
၂။ ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တီထွင်ခဲ့တာလဲ။
၃။ တားရော့ပညာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အနှစ်သာရက ဘာလဲ။
၄။ ဘာတွေက စပြီး လေ့လာရမလဲ။
၅။ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ လေ့လာရမလဲ။
၆။ ဘယ်လို လေ့ကျင့်ရမလဲ။
၇။ ဘယ်လိုဆရာတွေ၊ ဘယ်ဆရာတွေဆီမှာ တပည့်ခံရမလဲ။ သင်ယူရမလဲ။
၉။ ဘာစည်းကမ်း ကျင့်ဝတ်တွေကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းဖို့ လိုအပ်သလဲ။
အဲဒီလို “ဘ” (၉)လုံးနဲ့ လေ့လာပါတယ်။ ရှာဖွေတယ်။ လေ့လာတယ်။ စူးစမ်းတယ်။ စုဆောင်းတယ်။ မှတ်သားတယ်။ ဆရာရှာတယ်။ တပည့်ခံတယ်။ လေ့ကျင့်တယ်။။ “တားရော့” ဆိုတဲ့ ကားချပ်ကလေးတွေ စမြင်တွေ့ ကတည်းက စွဲလန်းခဲ့ သိချင်နေခဲ့တာ အနှစ် (၄၀)ကျော်ပြီ။ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ တားရော့ ဆောင်းပါး မှန်သမျှ ဖတ်တယ်။ (နားမလည်ဘူး၊ သဘောမပေါက်ဘူး) ဒါပေမယ့် ဖတ်တယ်။ တွေ့သမျှ အကုန်ဖတ်၊ အကုန်ဝယ်၊ အကုန်စု။ နိုင်ငံခြား/ ဗမာ ဗီဒီယိုကား တားရော့ပါတယ်လို့ ကြားတာနဲ့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်တယ်။ တစ်ကွက်ကလေးပဲ မြင်လိုက်ရ မြင်လိုက်ရ။ အဲဒီလိုနဲ့ စိတ်တိုင်းမကျ အားမရတော့မှ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို တစ်အုပ်ချင်း စေ့စေ့စပ်စပ် ဘာသာပြန် လေ့လာခဲ့တာ လေ့ကျင့်ခဲ့တာ (၆)နှစ်ကျော်ပြီ။ မပြည့်စုံသေးဘူး။ “ဘ” တစ်လုံးကို ကျွန်တော်ဖြုတ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့် တားရော့မှန်ရတာလဲ . . အဖြေရှာမရလို့ . . .
၄။ တားရော့ အစောင့်အရှောက်ပုဂ္ဂိုလ် (Cosmic Power / Universal Truth)
အစောပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလို အစောင့်အရှောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိတယ်/ မရှိဘူးဆိုတာ လက်တွေ့ သက်သေ မပြနိုင်ပါဘူး။ ယုံကြည် အားကိုးမှုတော့ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ “လောကကြီးရဲ့ သဘာဝ စွမ်းအားစုကြီး” ကို စူးစိုက် အာရုံပြုလိုက်ရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက်ကတော့ နှစ်သက်သလို အသုံးပြုပါ။
ကျွန်တော့် ယုံကြည်ချက်ကို ပြောရရင် ခေါင်းစဉ်ပါ နှစ်မျိုးစလုံးကို ယုံပါတယ်။ အစောင့်အရှောက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိတယ်လို့လည်း ယုံပါတယ်။ သဘာဝရဲ့ စွမ်းအားထုကြီး ကိုလည်း ယုံတယ်။ စကြာဝဠာကြီးထဲမှာ ရှိတဲ့ အမွန်တရားဆိုတာကိုလည်း ယုံတယ်။
ရှင်းပါမယ်။ ဘာကြောင့် ယုံတယ်ဆိုတာ။ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းက လက်ခံ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ရှေးဟောင်း ပညာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ နက္ခတ္တပညာ၊ တားရော့ပညာ တွေကို မူလတီထွင်ခဲ့သူတွေဟာ ကောင်းကင်မှာ ဈာန်ပျံနိုင်တဲ့ ရသေ့သူတော်စင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေနဲ့ တစ်ကွ လောကကြီးကို ကောင်းကျိုးပြုဖို့ မကောင်းကျိုးတွေ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ကြဖို့ သူတို့ရဲ့ ဂမ္ဘီရပညာတွေနဲ့ စတင်ဖန်တီး ပြုစုပေးထားခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီပညာရပ်တွေကို စောင့်ရှောက်နေကြတဲ့ သူတော်စင်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဆရာအစဉ်အဆက်ကို လေးစားကြည်ညိုဖို့နဲ့ သစ္စာတရားရှိဖို့ လိုတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
နောက် Cosmic Power / Universal Truth . .။ စကြာဝဠာကြီးလို့ပဲ ခေါ်ခေါ်။ လောကကြီးလို့ပဲ ပြောပြော။ သဘာဝတရားကြီးပဲလို့ မှတ်မှတ် အတူတူပါပဲ။ အဲဒီ လောကကြီးက မမှန်ကန်မှု၊ တစ်ဖက်စောင်းနင်းနိုင်မှုတွေကို လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ အင်အား ညှိပေးတယ်။ ပိုနေတာတွေ၊ များနေတာတွေ၊ လွန်နေတာတွေကို တနည်းနည်းနဲ့ ပျက်စီးစေတယ်။ (တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ စကြာဝဠာကြီး၊ လောကကြီး၊ သဘာဝတရားကြီးကို မဖျက်စီးပါနဲ့) အားလုံးကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ အချိန်တစ်ခု၊ အတိုင်းအတာ တစ်ခု လောက်တော့ ကြာကောင်းကြာမယ်။ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပေးတယ်။ လူသားတွေ လိုက်မမှီနိုင်အောင် လျှို့ဝှက်သိမ်မွေ့ နက်ရှိုင်းလှတယ်။ ယနေ့ လူသားတွေ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အသစ်တီထွင်နေကြတာကို Research လို့ပဲသုံးတယ်။ Search က ရှာဖွေတာ။ Re က ပြန်လည်၍ နောက်သို့။ ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ Research = ရှိပြီးသားတွေ၊ ကျောက်သွားခဲ့တာတွေ (သဘာဝတရားကြီးမှာ ရှိနေပြီးသား အကြောင်းအရာ စွမ်းအင်တွေ) ကို ပြန်လည်ရှာဖွေခြင်း မဟုတ်ပါလား . . ။ လောကီလူသားမှန်သမျှ လောကကြီးရဲ့ စွမ်းအင် သဘာဝတရားထဲက မလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး . . .။
“အစောင့်အရှောက်ပုဂ္ဂိုလ်/သဘာဝစွမ်းအင်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိတာလေးတစ်ခု ပြောဖို့ သတိရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တားရော့ဟောဖို့ ကားချပ်တွေ မွှေနှောက်ကြတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်ရံ သေသေချာချာ ကိုင်တွယ်နေတဲ့ အထဲက ကားချပ်တစ်ခု တစ်လေဟာ ဘေးကို လွင့်ကျ/လျှောကျ သွားတယ်။ အဲဒီကားချပ်က လာမေးသူ သိချင်တဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာ အဖြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ (၇)ချပ်/ (၁၀)ချပ် ကားချပ်များများနဲ့ ဖြန့်ခင်းပြီး ဟောဖို့ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေစဉ်မှာ ကားချပ်တွေကို တစ်ချပ်ချင်းကြည့် ပေါင်းစပ်ပြီး ခြုံငုံသုံးသပ်ဖို့ ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ခုသော ကားချပ်စီကို အကြည့်က ခဏခဏ ရောက်သွားတယ်။ ဆွဲဆောင်နေတယ်။ ဒါဆိုရင် သေချာပြီ။ အဲဒီကားချပ်က လာမေးသူရဲ့ ထူးခြားချက်ကို ပြောပြနေတာပဲဆိုတာ . . ။ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရတော့ အဲဒီလိုတွေ သတိထားမိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီကတ်တွေက ထူးခြားမှန်ကန်တဲ့ ဟောချက်တွေကို ထုတ်ပေးခဲ့တာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးနော် . . ရံဖန်ရံခါမှ ဖြစ်တာ။
အဲဒါတွေက အဖြေရှာလို့မရတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဂမ္ဘီရဆန်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်မနေပါလား။ အဲဒါတွေကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တားရော့အစောင့်အရှောက် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဆရာအစဉ်အဆက်တွေကို ယုံကြည်တယ်။ လေးစားတယ်။ သဘာဝရဲ့ စွမ်းအားစုကိုလည်း ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာအစဉ်အဆက်ကို နေ့စဉ် ရှိခိုးတယ်။ မေတ္တာပို့တယ်။ အမျှဝေတယ်။ မှားတာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်တယ်။ တားရော့ပညာကို ပိုမို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ဖို့ သင်ကြားပေးပါ။ လမ်းညွှန်ပေးပါလို့ တောင်းပန်တယ်။ တားရော့ပညာနဲ့ (၇)ရက်သားသမီးကို အကျိုးပြုနိုင် ရပါလို၏ လို့ ဆုတောင်းတယ်။
သင့်အတွက်ကတော့ As you Like ပါပဲ . . . . ။
ဘုရားစောင်းတန်းက ပန်းပုဆိုင်တွေမှာ ဘုရားပုံတော်တွေ အမျိုးမျိုး လာအပ်ကြတယ်။ ဒက္ခိဏသာခါ၊ ညောင်ပင်ရဲ့ တောင်ဘက်အကိုင်း၊ သစ်ကနက်၊ ယမနေ၊ ကန့်ကော်၊ ခရေ၊ ပိတောက်၊ ဇီး၊ ထိန် စသည်ဖြင့် အသားအမျိုးမျိုး။ ပုံတော်တွေကျပြန်တော့လည်း ဒက္ခိဏသာခါ၊ ဆင်ခံ၊ မြင်းရံ၊ ဆင်ခံ လာဘမုနိ၊ မဟာမြတ်မုနိ၊ ဘေးကင်းလာဘ်ရွှင်၊ ဓမ္မစကြာ မုဒ္ဒြာ စသည်ဖြင့် ကာယကံရှင်တို့ စိတ်တိုင်းကျ ပုံတော်တွေ။ ဆရာတော်က ကိုးကွယ်ခိုင်းလို့။ ဗေဒင်ဆရာက ခိုင်းလို့၊ ဘိုးတော်က လမ်းညွှန်လို့ . . ။ အကြောင်းပေါင်းများစွာ . . . ။
လာချင်တဲ့ သစ်သားနဲ့ လာချင်တဲ့ ပုံတော်တွေ လာချင်ရာလာခဲ့။ အဲဒီသစ်သားတုံးက ပန်ပုဆရာရဲ့ ခြေနှစ်ဘက်အောက် ရောက်သွားတာချည်းပဲ။ ခြေနှစ်ဘက်ကြားမှာ ဖိရင်း ညှပ်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ထွင်းထုလာလိုက်တာ ပုံတော်ပေါ်လာပြီ။ ဒါပေမယ့် သင်္ကန်းရဲ့ အနားနှုတ်ခမ်းတွေ၊ မျက်စေ့တွေ၊ နားတွေကို ကြည်ညိုဖွယ်ရာဖြစ်အောင် ဖန်တီးရသေးတယ်။ ပန်းပုဆရာရဲ့ ခြေထောက်အောက်မှာပါပဲ။ ခေါင်းတော်ပေါ်က ဆံခွေလေးတွေကို လက်ယာရစ် အခွေကလေးတွေဖြစ်အောင် တစ်ခုချင်းလှီးဖြတ်၊ ခြေထောက်တွေ အောက်မှာပါပဲ။ မဟာမြတ်မုနိပုံတော်ဆိုရင် မကိုဋ်တွေ နားကင်းတွေ ထွင်းထုရသေးတယ်။ ခြေထောက်အောက်မှာပဲ ရှိသေးတယ်။ ပြီးသွားပြီ . .။ အချောကိုင် ကော်ပတ်စား ရသေးတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ ဖိတန်ဖိ၊ ဒူးနှစ်လုံးကြား ညှပ်တန်ညှပ်နဲ့ ကော်ပတ်စားချောရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆေးသုတ် ရွှေချပြီး လာအပ်တဲ့သူလက် ရောက်သွားတယ်။ လာရွေးယူတဲ့ အချိန်ကစပြီး ရိုရိုသေသေ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ပင့်မချီသွား။ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်ဦးခန်းပေါ်မှာထား။ အနေကဇာတင်။ ပန်းရေချမ်း ကပ်လှူ။ နေ့စဉ် စားဦးစားဖျား ကပ်လှူ၊ ဘုရားဆင်းတုတော်ရှေ့မှာ နေ့တိုင်း ရိုရိုသေသေ ထိုင်ရှိခိုး။ သီလယူ။ တရားဘာဝနာ ရွတ်ဆို ပွားများ။ မေတ္တာပို့ အမျှဝေ ဆုတောင်း . . . ။
ဘယ်အချိန်မှာ ဒီဆင်တုတော်ဟာ ကိုးကွယ်ရာထိုက်သွားတာလဲ။ ပန်းပုဆရာရဲ့ ခြေနှစ်ဖက်ကြားက ထွက်လာတဲ့ ဆင်းတုတော်ကို အထွတ်အမြတ်ထားပြီး ကိုးကွယ်သင့်ရဲ့လား . . . ။ ကုသိုလ်ရော ရပါ့မလား . . ။
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
တားရော့ကားချပ်တွေကိုလည်း နိုင်ငံအသီးသီး၊ လူမျိုးအသီးသီးက ပုံနှိပ်စက် အသီးသီးမှာ ပုံနှိပ်ကြတယ်။ ပန်းချီဆရာ အသီးသီးကလည်း သူတို့ ဆန္ဒရှိသလို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲကြတယ်။ ပြီးတော့ စာအုပ်ဆိုင်ပေါ်တင်ရောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားဖြစ် မ၀ယ်နိုင်သူတွေက ကော်ပီပွားပြီး သုံးကြရတယ်။ အဲဒီကားချပ်တွေမှာ ဂမ္ဘီရစွမ်းအင်ရှိရဲ့လား။ ဘယ်လို ဘယ်ပုံနဲ့ စွမ်းအင်တွေ ရောက်လာမှာလည်း . . . ။
ဘုရားပုံတော် ဆင်တုတော်တွေဟာ ကိုကွယ်သူရဲ့ လက်ထဲရောက်ပြီး ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ပွား ကိုယ်စား ရုပ်ပွားတော်ပါလားလို့ ယုံကြည်သဒ္ဓါပွားလိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ကိုးကွယ် ထိုက်သွားပါပြီ။ အနေကဇာတိသံသာရံ ဆိုတဲ့ ဂါထာတော်နဲ့ ဥဒါန်းကျူးရင့်ပြီး အနေကဇာတင်လိုက်ရင် ပိုပြည့်စုံပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းတာကတော့ ဆင်တုတော်ကို နံ့သာရေနဲ့ သပ္ပါယ်ဆွတ်ဖျန်း အလှူဒါနလုပ် အကျင့်သီလလည်း ပြည့်စုံတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ပင့်ဖိတ်၊ အနေကဇာတင်လိုက်တဲ့အခါ ပိုပြီး မွန်မြတ်ပြည့်စုံသွားတာပေါ့။ အဲဒီနောက် သက်ရှိထင်ရှား မြတ်စွာဘုရားအမှတ်နဲ့ အလုပ်အကျွေးပြု ကိုးကွယ်တဲ့အခါ ကုသိုလ်တော် အနန္တ ရတော့တာပေါ့။
တားရော့ ၀ါသနာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ တားရော့ကားချပ်ထုပ်ရအောင် ရှာဖွေ ကြိုးစားရတာပါ့။ တစ်နေ့နေ့မှာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ကားချပ်ထုပ် တစ်မျိုးမျိုးတော့ လက်ထဲရောက်လာမှာပေါ့။ ပေးလို့ပဲ ရရ။ တောင်းလို့ပဲ ရရ။ ၀ယ်လို့ပဲ ရရ။ လက်ထဲရောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ၀မ်းပမ်းတသာ နှစ်ထောင်းအားရ တန်ဖိုးထား အလေးအနက်ထားမိပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး အဲဒီကားချပ်ထုပ်ဟာ အသက်ဝင်သွားပါပြီ။ ပတ်ထုပ်ပိုင်ရှင်မှာ ဂမ္ဘီရ တားရော့ပညာတွေ ပြည့်စုံသထက် ပြည့်စုံလာလေလေ ကျားချပ်တွေက အစွမ်းသတ္တိ ရှိလာလေလေ . . ။ ပိုင်ရှင်က ယုံကြည်ရင် ယုံကြည်သလောက်၊ အလေးထားရင် အလေးထားသလောက် ကားချပ်တွေကလည်း နိုးကြားလာပါတယ်။ တားရော့ကတ်ထုပ် ပိုင်ရှင်ရယ်၊ တားရော့ကတ်ထုပ်ရယ်၊ တားရော့အပေါ် ယုံကြည်မှု၊ တားရော့ပညာကို နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်မှု (အစောင့်အရှောက်ပုဂ္ဂိုလ်/သဘာဝစွမ်းအင်) ဆိုတဲ့ အကြောင်းတရား (၃)ခုဟာ တြိဂံအသွင် ပြန်အလှန် စွမ်းအားညီညွတ်စွာ ပေါင်းစပ် ဆက်နွယ် စီးဆင်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီ ကားချပ်ထုပ်ဟာ သင့်အတွက် ဂမ္ဘီရပစ္စည်း/ သိဒ္ဓိ၀င်ပစ္စည်း (မေးသမျှ ဖြေနိုင်မယ့်) ဖြစ်သွားပါ လိမ့်မယ်။
သာမန် စကားလေးတစ်ခွန်းကိုတောင် စီး-၀ါး ဘောင်ထဲဝင်အောင် သံစဉ် အနိမ့်အမြင့်ကလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ဂန္တ၀င် တေးဂီတ တစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားရသေးတာပဲ . . ။
ယခင်ရေးသားဖော်ပြပြီးသားတွေကို ဖတ်ပြီးသူတွေလည်း ထပ်မှတ်မိအောင်၊ မဖတ်ရသေးသူတွေလည်း ဖတ်ရအောင် ပြန်ရေးပေးပါဆိုလို့ သိစေချင်တာတွေ ရေးလိုက်တာ မရေးဖြစ်သေးတဲ့ အကြောင်းတွေ တော်တော်များများ ပါသွားတယ်။ အခြေခံ အထွေထွေ သဘောတရားတွေ ခေတ္တရပ်ပြီး ကားချပ်တွေအကြောင်း ပြန်ဆက်ရအောင်။ နောက် အခွင့်သင့်တဲ့အခါ သတိရတာလေးတွေ ပြောကြတာပေါ့ . . ။
Posted by aha at 11:32 PM